Ciidanka Xoogga Dalka oo si awood ah kula Wareegey Magaaladda Matabaan - Awdinle Online
Home News Ciidanka Xoogga Dalka oo si awood ah kula Wareegey Magaaladda Matabaan
Ciidanka Xoogga Dalka oo si awood ah kula Wareegey Magaaladda Matabaan
November 02, 2019 (AO) – Dagaal lama filaan ah oo u dhaxeeya ciidamo kala taabacsan Ahlu-Sunna Waljamaaca iyo dowladda federaalka ayaa goor dhaw ka dhacay magaalada Matabaan.
Wararka ayaa sheegaya in dagaalkaas ay ciidamada dowladdu kula wareegeen gacan ku heynta degmada Matabaan oo mudo dheer ay maamulayeen Ururka Ahlu-Sunna Waljamaaca oo fadhigiisu yahay magaalada Dhuusamareeb.
Dad Goobjoogayaal ayaa xaqiijiyay in dagaal kooban uu ka dhacay Magaalada Matabaan, islamarkaana Ciidanka Ahlu-sunna ay ka baxeen.
Ciidanka Ahlu-sunna ayaa hadda ku sugan duleedka degmada Matabaan, waxaana Wararka qaar ay sheegayaan in Ahlu-sunna ay ku jirto abaabul iyo Aruursi Ciidan.
Dhin kale, duleedka magaalada Matabaan ayaa koox hubaysan waxa ay weerar jid gal ah ugu gaysatay wafdi uu la socday wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya Cabdi Maxamed Sebriye.
Waxaa la sheegay in weerarkaas ay iska caabiyeen ilaalada wasiir Sebriye, ka dib is rasaasayn socotay muddo kooban oo dhex martay waxaana loo maleynayaa in dableyda geysatay weerarkaas jid galka ah ay taabacsanyihiin Ahlu-Sunna oo si buuxda u maamulaysay magaalooyinka Guriceel iyo Matabaan.
Wasiir Sebriye ayaa gaaray magaalada Matabaan oo sida la sheegay gacanta u gashay ciidamada xoogga dalka qeybtooda 21aad, kuwaas oo hada si buuxda u maamulaya gacan ku haynta Matabaan.
Wasiirka arimaha gudaha ayaa sida la sheegay goor dhaw goob fagaare ah kula hadli doona dadka ku nool magaalada Matabaan.
Previous articleGuddoomiye Cusub Oo Loo Magacaabay Afgooye
Next articleDowladda jabuuti oo Soomaaliya u soo dirtay Diyaaradda sida Gar Gaar